Mbadamba Ihe Ncha maka Ihe nsure ọkụ na -agba ọsọ ngwa ngwa Mbadamba unyi ọkụ ọkụ 35 mm resin Burner Rolls Pack of 120 Coal Briquettes Charcoal Burner Instant Fire Coal Tablet.
Mbadamba Ihe Ncha maka Ihe nsure ọkụ- Mbadamba Ọkụ Ntanetị Ngwa ngwa - Ọkụ Disk Uncle - 35 mm Resin Burner Rolls - ngwugwu nke 120 Coal Briquettes - Ọkụ unyi - Mbadamba Ọkụ Ọkụ ozugbo.
Ngwugwu akụkụ: 7 x 5.5 x 3.1 Inch
Ibu ihe: 1.82 pound
Ụdị ihe: Mbadamba
Oge: 0.75 Oge
Ahụmahụ ọhụrụ:Nwee ọmarịcha ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ gị dị mfe na diski unyi ozugbo anyị dị ịtụnanya! Ha na -enwu ọkụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi anya ma na -ewepụta nwayọ na -adịru ihe ruru nkeji iri anọ na ise.
Ọkụ okike: A na -eji briquettes coal anyị eme osisi osisi osisi 100% eke. Mbadamba ụrọ ndị ahụ enweghị isi na enweghị isi, nke na -enye gị ohere ịnụ ụtọ ụtọ nke ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ gị.
Nnukwu ngwugwu: Ntọala ahụ gụnyere mpịakọta iri nwere capsule iri ọ bụla. Unyi ọkụ ọkụ ngwa ngwa nwere dayameta 33 mm ma ọ bụ 40 mm. Ha dị mma maka isure ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ, na -enye gị ohere izu ike ma nwee ahụmịhe ahụ nke ọma.
Ezigbo ire ọkụ:Diski unyi anyị nwere ire ọkụ na -aga n'ihu mgbe niile. Enwere ike mụnye ha ọkụ ngwa ngwa na enweghị ike na -eji naanị egwuregwu ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Otu ngwa ngwa ọkụ ọkụ ọkụ nwere ike ire ọkụ ruo nkeji iri anọ na ise.
Ọtụtụ ihe kpatara ya: Diski unyi ndị a dị mma maka isure ihe nsure ọkụ. I nwekwara ike resin ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ maka aromatherapy, SPA, na ọgwụgwọ Turkey. Ha na -adigide ma ha enweghị kemịkal ma ọ bụ nsị.
Udo nke Uche: Mee ka icheku ọkụ gị, nọdụ ala, zuru ike! Ọ bụrụ na ị na -enwe nsogbu ọ bụla na ngwaahịa anyị, wepụta ụbọchị 30
Unyi anyị bụ uru kacha mma: Diski kọlụm 120 n'otu iwu ọ bụla! Anyị na -ewetara puku kwuru iri puku ndị ahịa Amazon na -eguzosi ike n'ihe ọkụ ọkụ kacha mma maka afọ.
Afọ ojuju ndị ahịa:Anyị nwere obi ike na ị ga -enwe mmasị na ịdị mma nke ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ resin. Ndị ahịa anyị bụ ihe kacha anyị mkpa 1, ọ bụ ya mere anyị ji akwado nkwado adịchaghị na nkwa ịkwụghachi ụbọchị 30 maka ịzụrụ ihe egwu.
Nke gara aga: Darkelves mmanya na -egbu egbu siri ike na -eguzogide ọgwụ ọkụ na -egbu mmanya obere ite na -ekpo ọkụ siri ike mmanụ na -adịgide adịgide siri ike mmanya na -egbu egbu na -eguzogide.
Osote: Ọkụ Chicken Leg Wing Rack 14 Ohere igwe anaghị agba nchara Metal Roaster Guzosie na Ntanye Drip maka onye na-ese anwụrụ ma ọ bụ oven, nchekwa efere, enweghị nkwụ, dị mma maka Bbq, picnic
Unyi Maka Hookah
Onye na -ejide unyi nku
Ọkụ Hookah Iran
Mkpuchi Ọkụ Hookah
Unyi hookah ngwa ngwa
Shisha Hookah Unyi
Mbadamba unyi Darkelves Maka ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ ...